Dadka deggan degmada Älvysby waxaa lagu yaqaan iney yihiin dad ganacsiga u furfuran. Degmada waxaa ka jira 800 shirkado oo ka hawlgala dadyowga degmada oo tiradoodu gaareyso 8000 qof. Degmada Älvysby waxay leedahay jawi ganacsi ee ugu wanaagsan gobolka Norrbotten sida laga soo xigtay rugta ganacsiga Iswiidhan waxayna ku jiraan kuwa ugu wanaagsan marka laga hadlayo ganacsiga dumarka. Degmada Älvsbyn waxaa kaloo ka jira nolosha ururada oo ah mid aad u xoogbadan oo firfircoon ee dhammaan dhinacyada ciyaaraha iyo dhaqanka. Älvsbyn waxaa loogu magac daraa "Dheemanka Norbotten" waxayna si deggan u dhex fadhidaa buuraha kaymaha leh ee ku dheggan Piteälven. Degmada Älvsbyn waxaa ku jira biyadhaceenka weyn ee xoogga badan kaasoo ah biyo dhaceen iskii u socda ee ugu weyn yurub.
Dadka badigoodu waxay degmada ka deggan yihiin tuulada dhexe Älvsbyn taasoo u dhaw dabeecadda, badda, meelaha barafka, daadegga barafka lagu ciyaaro iyo waxyaabo kale. Shirkadda guryaha ee Älvsbyn (Älvsbyns fastigheter) waa shirkad degmadeed ee guryaha taasoo iibisa guryo dabaq oo baaxado kala duwan leh ee ku yaala bartamaha tuulada Älvsbyn.
Ururka saaxiibtinimada ee Älvsbyn waxaa ku jira dad cusub oo iswiidhish noqday ee deggan degmada Älvsbyn. Waa barta kulanka ee dhammaan soo galootiga waddanka iyo dadka waddanka ku dhashay labadaba. Ururka saaxiibtinimada wuxuu gacan ka geysanayaa wanaajinta wadajirka dadyowga. Waxay abaabulaan noocyo kala duwan oo ah firfircooni sida tusaale ahaan qaxweysi iyo ciyaarta bilyaardiga si dadka loogu soo dhaweeyo wadahadallo iyo xiriir yeelasho isku xidhaya xuduudaha dalka gudihiisa. Waxaa kaloo intaa dheer in kaniisadaha kala duwani ay abaabulaan hawlo firfircoon iyo xarumo kulan. Kaniisadaha ku yaalla degmada Älvsbyn waxaa ka mid ah Korskyrkan, EFS-kyrkan iyo Svenska kyrkan. Diiwaanka ururada waxaad ka heleysaa adigoo booqda bogga internetka degmada ee Älvsbyns.
Halkaa waxaa laga helaa dukaanada dharka iyo cuntada, maktabada buugaagta, xafiiska shaqada, xafiiska maamulka degmada ee qaabilaadda soo galootiga dalka iyo xafiiska adeegga bulshadda.Dukaanada gacan labaadka (alaabaha la soo isticmaalay), maqaayado, goobaha qaxweysiga, rugta jimicsiga, isboortiga & dabaasha. Degaandegga lagu ciyaaro barafka ee ku yaalla Kanisberget iyo fursado wanaagsan oo lagu sameyn karo ciyaaro firfircooni ee xilliyada xagaaga iyo jiilaalka, tusaale ahaan ciyaarta xeegada barafka, ciyaaraha kubadda cagta iyo ciyaaraha kale ee barafka.
Waxaad halkan ka jira fursado fiican oo ah waxbarashada dadka waaweyn ee dhammaan heerka dugsiga hoose, dugsiga sare iyo waxbarashada jaamacadda. Bogga internetka ee Älvsbyn waxaa ku jira waxbarashada sfi, särvux, komvux, barashada xirfadaha (yrkesutbildning) iyo fursado wax lagu baranayo adigoo meel fog jooga (distansundervisning) oo aad ka baran karto jaamacadda Luleå iyo Umeå. Barashada mujtmaca dalkan waxaa lagu dhigaa Luleå ayadoo lagu baranayo afka hooyo. Ma jiro waqti sugitaan ee dugsiga sfi. Warbixin dheeraad oo ku saabsan hababka kala duwan ee waxbarashada waxaad ka heleysaa bogga internetka ee degmada Älvsbyn.
Magaalooyink waaweyn ee Älvsbyn waxaa ka jira xarumo caafimaad oo aad ka heleyso daryeelka caruurta iyo hooyooyinka,Daaweynta masaajeynta,tababarka xubnaha jidhka iyo rugta qaabilaadda dhallinyarada.Daryeelka caafimaadka ee dhakhtarada takhasuska waxay ka jiraan Piteå (50 km) iyo Sunderbyn (65 km). Cusbitaalka ilkaha wuu ku yaalaa tuulada.
Isgaarsiinta dhinaca gaadiidka ee u kala goosha tuulada Älvsbyn wey wanaagsan tahay. Iskuxidhka basaska ayaa si sahal ah waxay kaaga dhaqdhaqaajin karaan magaalooyinka dhawdhaw sida Boden, Luleå iyo Piteå. Tuulada Älvsbyn waxaa ka jira saldhig tareen ee ku geyn kara Boden, Luleå iyo Stockholm. Isku xidhka diyaaradaha waxay ka jiraan Luleå. Duulimaadka Luleå – Stockholm waxay qaadaneysaa ku dhawaad hal saac.
Shirkadaha ugu waaweyn ee degmada Älvsbyn waa Polarbröd iyo Älvsbyhus.Waxaa xitaa ku yaalla shirkadaha ku tijaabinta gaadiidka cimilada qabow sida Arctic Falls ee leh tijaabooyinka joogtada ah ee ugu horeeyey iswiidhan ee tijaabinta gawaarida xilliga qabowga jiilaalka waana tan ugu weyn iswiidhan ee tijaabinta taayirada baabuurta.
Legitimerad lärare i spanska 100% , till Älvåkraskolan och Vidselskolan Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
FMV söker Sektionschef till Telemetrisektionen T & E Vidsel Tekniska Enhet Avdelningschef, statlig
Familjepedagog 100% inom Barn - och familjeenheten i Älvsbyn Socionom
Två undersköterskor tillsvidare på Ugglan , enhet Skogsgläntan Undersköterska, hemtjänst och äldreboende
Casinopersonal Älvsbyn Dealer
Skotarförare Skotarförare, skogsbruk
Personlig assistent i Älvsbyn Personlig assistent
Legitimerad Arbetsterapeut 100 % Tärnans dagverksamhet Arbetsterapeut
Sveaskog söker Virkesköpare till Älvsbyn Virkesköpare/Virkesinköpare
Leg. gymnasielärare 100% i Svenska , Svenska som andra språk och Engelska Lärare i gymnasiet
Operationssjuksköterska till Operationsavdelningen Piteå Operationssjuksköterska
Undersköterska till Operation , Piteå sjukhus Undersköterska, vård- o specialavd. o mottagning
Personlig assistent sökes för omgående anställning Personlig assistent
Gyminstruktör sökes till Actic Luleå Instruktör/Tränare inom specialidrott
Grupptränare i yoga sökes till Actic Luleå Instruktör/Tränare inom specialidrott
Servicetekniker till Luleå Pumpreparatör
Lärare i åk 4 - 6 till Benzeliusskolan Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Bogga 1 ee ka mid ah 27
1 713 km2
Luleå 65 km
Boden 50 km
Piteå 50 km